Eyona WordPress SEO Plugin: Rank Math | Martech Zone
Phantse wonke umxhasi we-WordPress kwaye malunga nayo yonke into esijonge kuyo isebenzisa iplagin ye-Yoast ye-SEO ye-WordPress ukulawula izinto eziphambili zokuphucula injini yokukhangela (seo). Ngaphandle kweplagin yasimahla, iYoast ibonelela ngoluhlu lweeplagi ezikhethekileyo.
Ndihlala ndifumana ukuba iplagi ye-Yoast ye-SEO ilungile, kodwa zimbalwa iipevesi zezilwanyana endinazo:
Iphaneli yokulawula i-Yoast SEO inamava ayo omsebenzisi eyahlukileyo kumava omsebenzisi we-WordPress.
I-Yoast ihlala ityhala ukuba abantu baphucule baye kwelinye okanye ngaphezulu kweeplagi zabo ezihlawulweyo. Heyi… babonelele ngeplagi yasimahla esetyenziswa kakhulu, ke ndifuna ukubabona besenza imali ngalo mnikelo. Nangona kunjalo, ngamanye amaxesha kutyhala kakhulu ngokoluvo lwam, kwaye ukulayisha ngakumbi nangakumbi ii-plugins asiyonto ndiyifunayo ngokwenene kubathengi… Ndifuna kancinci.
The Iplagi yeYoast ifuna isibonelelo esincinci kwaye bendicothisa indawo yam.
Siyazi - ngeselfowuni kunye nokukhangela kubaluleke kakhulu - ukuba unokuphulukana namakhulu okanye amawaka abatyeleli ukuba amaxesha okulayisha iphepha lakho acotha kunomntu okhuphisana naye… ngoko ke isantya ibingumba obalulekileyo kum. Iyaphambanisa into yokuba iplagi ye-SEO inokucothisa indawo yakho. Ndiyaqonda ukuba oku kunokwenzeka nangayiphi na iplagin, kodwa ibaluleke kakhulu nge-SEO.
Isikhundla sePlag WordPress SEO Plugin
Umhlobo wam, uLorraine Ball, wakhankanya Uluhlu lwePlagi SEO iplagi kwaye kuye kwafuneka ndiyivavanye kwangoko. Iarhente kaLorraine, Ingqukuva, Yakha iisayithi zeWordPress ezintle nezifikelelekayo ngetoni yabathengi. Ndandinomdla kwangoko ekuvavanyeni iplagi kwaye ndayilayisha kwiindawo ezininzi ukuze ndibone ukuba isebenza njani.
I-wizard yokuguqula kwi-Yoast SEO Plugin ukuya Inqanaba leZibalo ilula. Enye inzuzo yeplagin kukuba unakho ukuba nayo ingenise kwaye ulawule indawo yakho yokubuyisela indawo. Ndinqwenela ukuba babonelele ngamaqela ukuba aququzelele ukuhanjiswa kwakho, kodwa ukunciphisa inani leeplagi kufanelekile ukuphulukana nelo nqaku.
Ndiyayixabisa ngakumbi isihlalutyi somxholo we-Rank Math, elunge kakhulu kwii-novices ze-SEO ukubhala kunye nokuphucula umxholo wamagama angundoqo abanokuthi bajolise kuwo. Kukho iitoni zeempawu ezipakishwe kule plugin ye-SEO - ngokudityaniswa kuGoogle okwenza ibe namandla amangalisayo.
Inqanaba leziBonelelo zeZibalo kunye neeNqaku
Kulula ukulandela iWizard yokuCwangcisa Inqanaba leMathematics lizilungiselela ngokwalo. Inqanaba leMathematika libonisa inyathelo ngenyathelo lokufaka kunye ne-wizard yokumisela eseta i-SEO yeWordPress ngokugqibeleleyo. Emva kofakelo, iNqanaba leMathematika liqinisekisa useto lwendawo yakho kwaye licebisa useto olufanelekileyo ukuze lusebenze kakuhle. I-wizard yenyathelo ngenyathelo emva koko icwangcisa indawo yakho ye-SEO, iiprofayili zentlalo, iiprofayili ze-webmaster, kunye nolunye useto lwe-SEO.
Ukucoceka kunye nokuLula koMsebenzisi -IMathematika yeRanki yenzelwe ukubonisa ulwazi oluchanekileyo kuwe ngexesha elifanelekileyo. Ujongano olulula, kodwa olunamandla lomsebenzisi luqaqambisa ulwazi olubalulekileyo malunga nezithuba zakho ecaleni kweposti ngokwayo. Ukusebenzisa olu lwazi, unokuphucula i-SEO yeposi yakho ngoko nangoko. I-Rank Math ikwabonisa i-snippet previews. Unokujonga kwangaphambili ukuba iposi yakho iya kubonakala njani kwii-SERPs, ujonge kuqala iziqwengana ezityebileyo, kwaye ujonge kwangaphambili ukuba isithuba sakho siya kujongeka njani xa kwabelwana ngaso kwimidiya yoluntu.
Isakhelo seemodyuli -Sebenzisa kuphela into oyifunayo kwaye ukhubaze ezinye. Inqanaba leMathematika lakhiwa kusetyenziswa isikhokelo seemodyuli ukuze ube nolawulo olupheleleyo lwewebhusayithi yakho. Khubaza okanye vumela iimodyuli ngalo lonke ixesha uzifuna.
Ikhowudi eyenzelwe iSantya -Sibhale ikhowudi kwasekuqaleni kwaye siqinisekisa ukuba yonke imigca yekhowudi inenjongo. Sibeke iminyaka yamava kule nto ukuze iplagi ikhawuleze ngokukhawuleza.
Yenziwe ngabantu emva kweMyThemeShop -Ngethuba leMathematika, uyazi ukuba usezandleni ezilungileyo. Ukwenza iikhowudi kunye nokugcina ipotifoliyo ye-150 + yeemveliso zeWordPress kusifundise into okanye ezimbini malunga nokwenza iiplagi ezingcono. Kwaye, siluthulule lonke ulwazi lwethu kwikhowudi yeMathematics.
Inkxaso yoShishino -Sijongana nezethu. Awuyi kushiywa uphakamileyo kwaye womile xa usebenzisa i-Rank Math. Sinikela ngexesha elikhawulezayo lokujika kwimibuzo yenkxaso kwaye silungise iibhugi ngokukhawuleza kunokuba ungazifumana.
Emva konyaka ndiqhuba le plugin, ndiye ndaphucula kwinguqulelo ehlawulwayo kwaye ndifudukele kubo bonke abathengi bam kuyo. Ndiye ndaluhlaziya uluhlu lwam iingcebiso Iiplagi zeWordPress zeshishini ngeRanki Mathematika njenge enye indlela yeYoast kwaye i ukufumana enye indlela iifowuni.
I-Rank Math vs. Yoast SEO
Inguqu yabo bonke abaxumi bam kule plugin ibe yinto engakholelekiyo. Ngokuqinisekileyo andizami ukuthoba umgangatho we-Yoast okanye impembelelo enayo kumzi-mveliso we-WordPress SEO, kodwa oku kwenziwa ngokutsha kweplagi ye-SEO kuye kwaba yinto emangalisayo. Iyakhawuleza, kulula ukuyisebenzisa, kwaye yomelele ngakumbi - ngakumbi inguqulelo yePro, eguqulelwe ngoku IsiJamani, iSpanish, isiFrentshi, isiTaliyane, isiJapan nesiDatshi.
Ndiqinisekile ukuba uya kubona izibonelelo. Njengecala, ndingathanda ngokunyanisekileyo ukubona iqela e-Automattic lizisa le plugin emangalisayo phantsi kwenkampani yabo ukunika i-SEO ingqalelo eyifaneleyo. I jetpack Iinketho ze-SEO azanelanga ngokulusizi.
Tyelela iNqanaba leMathematika
Ukubhengezwa: Ndingumthengi kwaye ndinxibelelene nayo Inqanaba leZibalo kwaye ndisebenzisa amanye amakhonkco adibeneyo kweli nqaku.
tags: umanyanisobest wordpress seo pluginUhlalutyo lomxholoamagamaisikhundla sezibaloiplagiSitemapsWordPressiplagi yamagamaI-wordpress seoxml iisemaphuyoast
Kutheni Ishishini lakho kufuneka Lithathele ingqalelo ukuThotyelwa kweCCPA